सबैभन्दा पहिलाे बेलायत पुग्ने नेपाली को थिए…….. ? – Gorkhali Dainik
October 7, 2020 199
सबै स्रोत यस्तै भन्छ । त्यो अर्थमा सबैले मान्ने गरेका छन्, जंगबहादुर नै बेलायत पुग्ने पहिलो नेपाली हुन् । तर, होइनन् । इतिहासमा भेटिएको नवीनतम तथ्यले भन्छ, उनीभन्दा अगाडि कोही अर्कै नेपाली बेलायत पुगिसकेका थिए ।
त्यही तथ्यअनुसार ऐतिहासिक घटनाको यसरी कल्पना गर्न सक्छौं । जंगबहादुर र उनको टोलीले बेलायतमा खुबै मोजमस्ती र घुममाम गर्‍यो । यस्तै कुनै दिन उनी लन्डन घुमिरहेका थिए ।
उनले बाटोमा भेट्टाए, आफूजस्तै नेपाली । आफूजस्तै नेपाली बोल्ने मोतीलाल सिंह । जंगबहादुर कति उत्साहित भए होलान् ? मोतीलाल कति खुसी भए होलान् ? उनीहरूले कसरी कुराकानी सुरु गरे होलान् ? त्यो कल्पना नै अविश्वसनीय छ ।
जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणबारे धेरै लेखिएका छन् । तर, त्यसै भ्रमणमा छुटेको एउटा ठूलो तथ्य हो, रहस्यमय मोतीलालबारे । सुरुमा भनिएको थियो, उनी भारतीय हुन् । नेपालका धेरै ऐतिहासिक पात्रलाई विदेशमा भारतीय भनेर लेखिएका छन् । धेरैले मोतीलालबारे यस्तै सम्झे र बुझे । त्यो भ्रम थियो ।
‘अहिले प्राप्त तथ्यले हामी के निश्चित ठोकुवा गर्न सक्छौं भने मोतीलाल नेपाली नै हुन् । यसमा अब कुनै विवाद रहेन,’ मोतीलालबारे अनुसन्धान गरिरहेका मानवशास्त्री कृष्णप्रसाद अधिकारी भन्छन् । उनी अक्सफोर्ड युनिभसिर्टीका रिचर्स फेलो हुन् ।
मोतीलालबारे नयाँ जानकारी प्राप्त भएपछि उनी खुबै रोमाञ्चित छन् । पछिल्लो समय जंगबहादुरको बेलायत यात्राबारे अनुबन्धन गरिरहेका पश्चिमेली विद्वान् हुन्, जोन ह्वेल्टन ।
‘जंगबहादर इन युरोप, द फस्ट नेपलिज मिसन टु वेस्ट’ उनको चर्चित पुस्तक हो । त्यसमा मोतीलालबारे उल्लेख छैन । तर, अब ह्वेल्टन पनि आफ्नो पुस्तकको नयाँ संस्करणमा मोतीलालको अध्याय थप्ने क्रममा छन् ।
मोतीलालबारे सबैभन्दा पहिले उल्लेख गर्ने विश्व पौडेल हुन् । उनले हिमाल खबर पत्रिकामा ‘बिर्सिएका मोतीलाल’ भनेर लेखेका थिए । त्यसलाई पढेर अनुसन्धानकर्ता अधिकारी खुबै दंग गरे । अनि, पछ्याउन थाले, इतिहासमा रहस्यमय रहेका मोतीलाललाई ।
बेलायतमा अचेल एक लाख नेपाली छन् । सायद योभन्दा पनि बढी । यी नेपालीलाई बेलायतमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन यस्तो ‘आइकन’ व्यक्तित्व चाहिरहेको थियो, जसबारे उनीहरूले गर्व गर्न सकुन् । उनीहरूका लागि त्यति बेला खुसीको सीमा रहेन, जति बेला मोतीलाल बेलायत पुगेका पहिलो नेपाली हुन् भन्ने तथ्य प्राप्त भयो ।
मोतीलालबारे प्राप्त सबैभन्दा ठूलो तथ्य हो, उनले आपैंले लेखेको लेख । त्यो लेख सन् १८५० जुलाइको ‘न्यु मन्थली म्यागजिन’ मा प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा उनको लेखको शीर्षक थियो, ‘लन्डनमा नेपालीको विवरण’ । उनलाई अंग्रेजी भाषाको राम्रै ज्ञान थियो । त्यसैले उनी अंग्रेजीमा लेख्ने पहिलो नेपाली पनि हुन् । पत्रिकाको ‘आर्काइभ’ बाट केही समयअगाडि मात्र त्यो लेखबारे थाहा भएको हो ।
लेखमा उनीबारे लगभग यस्तो उल्लेख छ, ‘म मोतीलाल सिंह नेपालको भादगाउँ भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ । यो राजधानी काठमाडौंबाट धेरै टाढा छैन । त्यो बेला गीर्वाण महाराजा थिए ।
यसैबीच नेपालले अंग्रेज अधीनस्त भारतसँग युद्ध गर्ने फैसला गर्‍यो । यति बेलासम्म मैले २० कृष्णपक्ष बिताइसकेको थिएँ । गोरखाको एउटा जाति भएको नाताले त्यो युद्धमा मलाई पनि पठाइयो । घमासान युद्धमा म घाइते भएँ र मलाई युद्धबन्दी बनाइयो ।
अधिकारीले पछि मोतीलालबारे सानो पुस्तक पनि तयार पारेका छन्, ‘मोतीलाल सिंहको रहस्यमय जीवन र उनको ऐतिहासिक आलेख’ । अधिकारीका अनुसार जंगबहादुरलाई भेट्दा मोतीलाल सम्भवत: ५६ वर्षका थिए । त्यति बेलाको चलनचल्तीअनुसार उनले आफ्नो नाम भने ‘मुतिलोल सिङ’ लेखेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्ने गर्छ, के ती मोतीलाल आफ्नो घर फर्कन सफल भए त ? उनको लेखमै पनि नामअगाडि ‘लेट क्रसिङ स्विपर’ जोडिएको छ । त्यसको अर्थ, जंगबहादुरको भ्रमणलगत्तै उनको मृ त्यु भएको थियो अथवा उनले त्यो पेसा छाडे, त्यसैले उनी भूतपूर्व कुचीकार भए त ? यसको दुवै अर्थ हुन सक्छ । अधिकारी उनीबारे थप अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
अधिकारी सम्मिलित सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेले मोतीलालबारे वर्षमा एकपल्ट उनको सम्झनामा कार्यक्रम गर्ने सोच पनि बनाएको छ । नेपाल र बेलायतबीच सम्बन्ध स्थापनाको दुई वर्ष पुग्न लागेको समयमा मोतीलालबारे जानकारी आउनु अधिकारी ठूलै उपलब्धि मान्छन् । उनी थप्छन्, ‘मोतीलालको भक्तपुरस्थित परिवारका नयाँ पुस्ता अझै छन् होला, तिनलाई मोतीलालबारे केही थाहा छ त ?’]
Prevचर्चाकै लागि पुण्यको उपद्रो, कुर्सी भाचेर देखाए…!
Nextसबै परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय ………..!
भोलिदेखि गाडि चल्न नदिइने ! (3679)
BREAKING NEWS: नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस् (3011)